Ukunakekelwa kwezinwele zasekhaya, amathiphu. Iresiphi yesimaki esondla ukunakekelwa kwezinwele ekhaya.
Izinwele ezinhle nezilungiswe kahle yilophupho kwanoma yimuphi owesifazane. Iphupho ukuthi, ngokuzikhandla kakhulu, lingabheka kalula. Sikunikeza amathiphu azosiza ukuthi izinwele zakho zibe nempilo enhle, futhi ukuzinakekela kulula kakhulu.
Ukunakekelwa kwezinwele zasekhaya: imithetho esemqoka nezincomo
Okokuqala, ubuhle bezinwele buxhomeke kakhulu ekuhlanganiseni kwabo okulungile. Okokuqala, kufanele kube njalo. Kudingekile ukuhlanza njalo lapho unenkinga yokuvumela amacu ukuba adlule ngeminwe yakho. Okwesibili, ikhefu kufanele lihlale lihlanzekile, lizimele futhi lifanise nezinwele zakho. Isibonelo, izinwele eziqondile futhi ezincane zingcono ukulwa nekhefu, futhi izinwele ezinzima nezinwele zihlanganiswe nama-bristles wemvelo. Okwesithathu, ungakhohlwa ukuthi inqubo yokuxuba ayinqunyelwe emsebenzini ongavuliyo. Kancane kancane futhi sixubha ngokucophelela phakathi kwezikhiye, siqala inqubo yokunikezelwa kwegazi ezimpandeni futhi sihlinzeke ngomzimba omnene ku-scalp, okuthinta kakhulu ukukhula kwezinwele zezinwele.
Isiphakamiso sesibili sokunakekelwa kwezinwele ekhaya sikhathazeka ngokuzikhethela kwezimonyo. Isibonelo, uma unezinwele ezincane, ezinamafutha, ungakhethi zonke izinhlobo zamafutha zokusetshenziswa kwansuku zonke. Futhi uma unamahluthu obukhulu futhi obunzima, ngokushesha udidekile ngenkathi uhamba, ungawunaki ukunakekelwa njengama-conditioners, masks, sprays izinwele ezingalawuleki.
Enye ithiphu lokunakekelwa ihlolisisa ukuhlolwa kwekhaya nge-stain. Ungaguquki oshayayo oluvuthayo ube yi-platinum blonde ekhaya. Akusilo ukulondoloza, kuwukuphulukisa okuhlanzekile, okusongela izinkinga ezinkulu. Ngikholelwa, ukuhlwitha izinwele ezinkundleni yokugezela ngeviki ngemuva kwalokhu "ukuzama", futhi emva kokubili, ukukhipha isikwele ngezinyembezi ku-salon eseduzane, uzozilahla ngokuzenzekelayo "ukwenza okufanayo" kwe-amateur. Yiqiniso, lokhu kusembi kakhulu. Esikhathini esingcono kakhulu, ngeke uvele njengenge-blonde, kodwa njengenkukhu ephuzi ene-tint eluhlaza ku-vertex. Ngenxa yalokho, lo mthunzi "chic" uzodingeka ulungiswe ku-salon efanayo.
Awu, ungakhohlwa ukwethula izinhlobo ezihlukahlukene zokunakekelwa kwezinwele zasekhaya ngosizo lwezindlela zomuntu. Sibheka izindlela zokupheka ezihlolwe isikhathi esithile kanye nemikhiqizo: ama-coconut, amafutha omnqumo nama-burdock; inambuzane, i-chamomile, inja yavuka; i-avocado, i-banana, ilamula kanye noju. Okokuqala, ungasebenzisa insizakalo ye-banana-coconut okunomsoco wezinwele, iresiphi yesinyathelo ngesinyathelo esilungiselele yona.
Iresiphi ye-mask yonke yokudla okunomsoco kuzo zonke izinhlobo zezinwele
Enye yezinto ezithandwa kakhulu futhi ephumelelayo ingabizwa ngokuthi i-home prescription imaski enomsoco webhanana namafutha kakhukhunathi. Lungise ngokushesha kakhulu, izithako zithengeka kakhulu, futhi umphumela omuhle emva kokusebenza kwawo kusobala ngemuva kokuqala.
amafutha kakhukhunathi -1 tbsp.
uju lwamanzi -1 tbsp.
amafutha omnqumo -1 isipuni
i-banana - 1-2 izingcezu.
Faka i-pulp yebhanana ebhodini le-blender.
Ukuze uzuze ukufana okuhambisanayo kwe-mask ebhanana, faka i-spoonful uju bese uvula i-blender.
Esikhathini sobuningi obuningi obuningi, engeza amafutha omnqumo namafutha kakhukhunathi, bese uphinde unike amandla i-blender. Mask the mask kuze ubuso iba yifane. Qaphela ukungabi khona kweziqhingi zamafutha emhlabathini - uma kungahlanganisi, bayovele bahlele izinwele bese bemboza ngefilimu epholile.
Njengoba sekufinyeleleke ukuhambisana okudingekayo, ingxube ingasetshenziswa imizuzu engu-30-45, emva kwalokho imaski kufanele ihlanjululwe ngokuphelele nge-shampoo oyikhonzile.
Amaski ezinwele nge-gelatin
Amakhowe wezinyosi zokwelapha izinwele
Okufanele ukwenze ukuze wenze izinwele zinyene
Iziphi izinwele zezinwele eziyingozi kunazo zonke izinwele?
Izithakazelo ze-Elixir Ultimate: ukunakekelwa kwebusika no-Kérastase
Ukulungele kwengqondo kwengane ngokufunda
Izithasiselo ekudleni kwezingane
Indlela yokuthola umuntu ukuba abe nomntwana
Bosu-hemisphere: isicelo kanye nemisebenzi
Ungakugwema kanjani ukungqubuzana emndenini?
Intsha kanye nesimo sakhe sengqondo esibi kwabanye
Ingulube ngamakhowe kanye noshizi